မတျ 7, 2019 – Healthy Life Journal
၊ စူး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ရေနွေးပူပူကို ပုံမှန်သောက်ပေးရင် ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများစွာ ရရှိစေနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ခံအားစနစ်ကောင်းစေပြီး အစာကြေနှုန်းကောင်းစေပါတယ်။ (၁) နာကျင်ကိုက်ခဲတဲ့ ဝေဒနာကို သက်သာစေပါတယ် ရေနွေးပူပူသောက်တာကြောင့် ခေါင်းကိုက်တာကနေ ရာသီလာတဲ့အထိ ဖြစ်တတ်တဲ့ နာကျင်ကိုက်ခဲတဲ့ ဝေဒနာကို သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ ရေအပူမှာ...
ချိတ်သန်ကောင်များကြောင့် သွေး ၂၂ လီတာ ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည့် ကောင်လေး
၊ ကိုထက် ၊ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်လောက်ကတည်းက ချိတ်သန်ကောင်တွေရှိနေခဲ့ပြီး သွေး ၂၂လီတာခန့် စုပ်ယူခံနေရတဲ့ အသက် ၁၄ နှစ်အရွယ် ကောင်လေးကို ဆရာဝန်တွေက ကုသမှုပေးခဲ့ရတယ်လို့ နယူးဒေလီ သတင်းအရ သိရပါတယ်။ ကောင်လေးရဲ့ ကျန်းမာရေးပြဿနာကို အဖြေရှာဖို့ ရှားပါးတဲ့...
သွားဆရာဝန်များ အဖြေရှာရခက်နေသည့် အမြွှာညီအစ်မတစ်ဦး၏ သွားပြဿနာ
၊ ကိုထက် ၊ ဆယ်ကျော်သက် အမြွှာညီအစ်မနှစ်ယောက်ဖြစ်သူ ကင်ဘာလီနဲ့ နီကိုလဲ့ဟာ ရုပ်ချင်းလည်းတူ၊ စိတ်ချင်းလည်းတူပြီး သူတို့ဟာ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ညီအမလိုရော သူငယ်ချင်းလိုပါ အရမ်းကိုချစ်ခင်ကြပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ပုံစံ၊ မျက်နှာအနေအထားသာမက အစစအရာရာတူနေတဲ့ အမြွှာညီအမနှစ်ဦးအနက် တစ်ဦးဖြစ်သူ နီကိုလဲ့က သွားပြဿနာတစ်ခုကို လွန်ခဲ့တဲ့...
ပါမောက္ခဒေါက်တာမြတ်စန္ဒာကျော် (အရေပြားအထူးကု ဆရာဝန်ကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း) မေး. ဘယ်လိုမှဲ့တွေကို ဖယ်ရှားသင့်ပါသလဲ ဆရာမ။ ဖြေ. မှဲ့ရဲ့ နေရာ၊ အရောင်၊ အရွယ် ပြောင်းလဲပုံတွေက အရေးကြီးလှပါတယ်။ တချို့က မျက်လုံးအောက်က မှဲ့ကို ကံမကောင်းဘူးလို့ ယူဆတယ်။ ကံကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ မှဲ့ကိုလည်း...